Tanterahina nanomboka ny zoma 23 jolay any Tokyo renivohitr’i Japana ny Lalao olimpika 2020. Hitohy hatramin’ny 8 aogositra 2021 io. Manana atleta hiaro ny voninam-pirenena i Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)
Nanainga androany Talata 20 Jolay 2021 hamonjy an'i Tokyo, Japon ny delegasiona Malagasy handray anjara amin'ny Lalao olaimpika, izay ho tanterahina ny 23 Jolay ka hatramin'ny 8 Aogositra 2021. Atleta 6 no handray anjara amin'ny fifaninana dia : - Eric Andriantsitohaina (fibatana fonjamby) - Tojo Andriantsitohaina (fibatana fonjamby)- Damiella Nomenjanahary (judo)- Murielle Rabarijaona (lomano)- Mickael Rasolonjatovo (lomano)- Todisoa Franck Rabearison (atletisma) Marihina fa 3 amin'izy ireo no niainga teny Ivato, ny 3 ambiny kosa hanainga ao Thaïlande sy Maurice avy hatrany dia hiazo an'i Tokyo. Nirary soa azy ireo ary miandrandra vokatra tsara ho entina hatrany hampiakatra avo ny hambompom-pirenena ny minisitry ny Tanora sy ny fanatanjahantena, Tinoka Roberto. (Jereo Sary Tohiny)
Hatao ao Maintirano ny 20 ka hatramin’ny 30 Aogositra ho avy izao ny « Jeux de Melaky ». Andiany faha-26 ny amin’ity taona 2021 ity. Efa manomboka ny fanomanana mikasika izany.
Tafakatra eo amin'ny laharana faha 27 manerantany ny Makis seniors vehivavy, ary dia mipetraka eo amin'ny laharana faha 4 eto amin'ny kaontinanta Afrikanina, manaraka an’i Afrika Atsimo (13), Kenya (25) ary Cameroun (26). Izay no vokatra azo taorian'ny fandresena faharoa azon'ny Makis Séniors Vehivavy tamin'ny Kenya Lionesses, nandritra ny fifaninana "Rugby Africa Women's Cup" natao tao Nairobi, Kenya farany teo.
Tafaverina an-tanindrazana ny talata 13 jolay ireo Makis an'i Madagasikara rehefa nandrato fifaninanana telo eo amin’ny taranja rugby. Fandresena 4 no azon'ireo ekipam-pirenena tamin’ireo lalao 6 natao. Tompondaka lefitra nandritra ny "Afrika Trophée Barthez" ny U20 lehilahy. Laharana faha 3 tao amin'ny Vondrona A nandritra ny fiadina ny ho tompondaka an'i Afrika (RAC 2021) ny Sénior lehilahy. Nibata ny amboara nandritra ny "Rugby Africa Women's Cup" ny Sénior vehivavy, ary nametraka azy ireo eo amin'ny laharana faha 27 manerantany. Nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, Rosa Rakotozafy, solotenan'ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena, TINOKA Roberto, sady nametraka ny mba hanajana ny lamina rehetra noho hamehana ara-pahasalamana. Noho izany indrindra dia tsy nahazo nifanerasera tamin'ireo mpankafy tonga nitsena azy ireo teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny delegasiona fa avy hatrany dia namonjy ny fiara nitondra azy ireo nihazo ny Kianja Makis Andohatapenaka izay toerana hanaovana ny fihibohana.
Notanterahina ny alakamisy 08 jolay 2021 tao amin'ny Novotel Ivandry ny fanolorana ny amboara sy fiarabana ny AS ADEMA, klioba nivoaka mpandresy teo amin'ny fiadiana ny ho tompondakan'i Madagasikara amin'ny taranja baolina kitra ho an'ny taom-pilalaovana 2020-2021. Nahitana klioba 13 avy amin'ny lafy valon'ny Nosy nandray anjara tamin’ity fifaninana ity. Tonga nanome voninahitra ny fotoana ny Tale Jeneraly misahana ny Fanatanjahantena, Rosa Rakotozafy izay nisolontena ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Tinoka Roberto. (Jereo Sary Tohiny)
dimanche, 04 juillet 2021 20:06
Antsiranana : Tontosa ny 81%-n’ny asa fanamboarana ny Kianja manarapenitra
Mandroso ny asa fanamboarana ny kianja manarapenitra ao Antsiranana. Efa mahatratra 81% ny asa fanamboarana no vita. Vinavinaina ho vita afaka efa-bolana ity kianja ity, ary hahazaka olona 6 000. Nivoitra io nandritra ny fidinana ifotony nataon'ny Minisitry ny Tanora sy ny Fanatanjahantena Tinoka Roberto ity fotodrafitrasa ity omaly Sabotsy 03 Jolay 2021. Nambaran'ny Minisitra fa mbola ho tonga ny seza izay hamenoana ny kianja, izay mitovy amin'ny seza ao amin'ny kianja manarapenitra ao Barikadimy Toamasina. Teo am-pamaranana ny fitsidihana dia niaraka nijery lalao baolina kitra tafiditra amin'ny andro fahatelo amin'ny fiadiana ny tompondakan’ny Seksiôna Antsiranana Voalohany, izay nifanandrinan'ny FC MAMAMI sy FC Ramena ny Minisitra Tinoka Roberto. Nandritra izany dia nanolotra baolina ho an'ireo mpilalao. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 02 juillet 2021 10:52
Kitra - Euro 2021 : Hotanterahina anio sy rahampitso sabotsy ny lalao ampahefadalana
Hiditra amin’ny lalao ampahefadalana ny fiadiana ny tompondakan’i Eorôpa amin’ny baolina kitra na Euro 2021. Lalao roa no hotanterahina anio, ka hisantatra izany ny fihaonan’i Soisa amin’i Espaina. Hatao any Saint-Pétersbourg- Rosia ny lalao. Aorian’izay ny fifandonan’i Belzika amin’i Italia, lalao izay hatao any Munich-Alemaina. Rahampitso sabotsy 3 jolay kosa ny lalao roa farany amin’ity dingana ity, izay hihaonan’ny Repoblika Tseky amin’i Danemark andaniny, izay hatao any Bakou-Azerbaïdjan, harahin’ny fifandonan’i Okraina amin’i Angletera, lalao izay hatao any Rome-Italia. Any Londres-Angletera avokoa no hatao ny lalao manasadalana roa ny talata 06 sy alarobia 07 jolay, sy ny lalao famaranana ny alahady 11 jolay amin’ity Euro 2021 ity.
Laharana faha efatra (4) i Madagasikara ao anatin'ny vondrona A nisy azy dia tapitra hatreo ny fifaninana ho antsika Malagasy tamin’ny fiadiana ny tompondakan’i Afrika eo amin’ny taranja handball sokajy vehivavy atao any Yaoundé Cameroun. Toy izao manaraka izao ny voka-dalao azon'i Madagasikara nandritra ny lalao isam-bondrona : ▪Sénégal 42 # 16 Madagascar ▪Madagascar 16 # 44 Tunisie▪Guinée 35 # 16 Madagascar